IINQANAWA ZESINKS PROS AND CONS (YOYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iinqanawa zeSinks Pros and Cons (yoyilo lwegumbi lokuhlambela)
Apha sabelana ngesikhokelo sethu sokuntywila ngenqanawa kunye nokulunga kunye nokuqwalaselwa koyilo kunye neempendulo kwimibuzo edumileyo malunga nolu hlobo lokuntywila. Izitya zokuntywila zahluke kancinane kunokwehla kwesiqhelo esinki esiqhele ukukuqhela. Ngale nto yahlukile uhlobo lwesinki yokuhlambela kukho izibonelelo kunye nokungalunganga xa kufikwa ekusebenziseni, isitayile, ukugcinwa kunye nokuguquguquka.
Ezi zinto zilungileyo kunye nezibi zinokukukhomba ngqo ngqo okanye ngokuthe ngqo ekusebenziseni isitya sokuntywila ekhayeni lakho.
Amanyathelo okuqala okucwangcisa umtshato
Yintoni iSink yeSink?
Iinqanawa zeSinks Pros
Isitya sitshona bucala
Uyilo lweSinki seSitya
Ngaba Iinqanawa Zokuntywila Zisebenza?
Ubungakanani bethumbu lesinki yesinki
Ngaba Isitya Sinks Sinks Kancinci?
Ngaba iSinks zeSitya zifuna uMsele okhethekileyo?
Ngaba iinqanawa zokuntywila zisesitayile?
IVessel Sinks Pros kunye neCons infographic
Isinki yesitya yaziwa njengendawo yokuntywila esityeni. Olu hlobo lwesinki yisinki ekhululekileyo ekhawuntarini.
Uninzi lwezinye iisinki zakhiwe kwisinki, ke umphezulu wesinki uhlala egungxula kunye ne-countertop. Isinki yesikhephe yahlukile ekubeni emazantsi emigca yesinki ephezulu kunye ne-countertop kwaye iqhotyoshelwe emanzini.
Kweminye imilo umphantsi wonke wesitya uhleli phezu kwetheyitile, kodwa isitya esingezantsi esingaphantsi kwenqanawa kukho indawo encinci emazantsi encanyathiselwe phezulu.
Isinki yesitya ifunyanwa kwiindawo zokuhlambela, kuba azomelele ngokwaneleyo ukumelana neemfuno kunye neemfuno zekhitshi.
Indawo eyongezelelweyo - Isinki yesitya yongeza igumbi elincinci kwiindawo ezimbini. Okokuqala, indawo yokubala yenqanawa yesitya iyandiswa ukusukela xa isinki, ejikelezileyo, ingahlali ngokupheleleyo kwikhawuntara ishiya igumbi elongeziweyo emacaleni.
Ukongeza, kukho igumbi elongezelelekileyo phantsi kwekhawuntari okokoko isitya asiphoswanga kuso. Indawo ephantsi kwekhawuntari yongeza igumbi kwiidrowa ezongezelelweyo okanye indawo yekhabinethi.
Uhlobo -Isitayile sesinki yesitya sihle kakhulu kwaye sisebenza ngeendlela ezahlukeneyo. Isitya sokuntywila sinika into enkulu enkulu nokuba ngexabiso eliphantsi eliphambili.
Zininzi kakhulu iimilo, ubungakanani kunye nokugqitywa kokungena kwesitya, esinokunceda kulungelelwaniso phakathi kwesinki yesitya kunye nezinye izinto kwigumbi lokuhlambela.
Ukufakwa -Ukufakelwa ngumoya opholileyo xa kufikwa kwisitya sokuntywila. Uninzi lweesinki kufuneka lunqunyulwe kwaye lufakelwe ngokufanelekileyo, ngesitya sokuntywila, kufuneka kuphela ukuba kubekho umngxuma wokudreyina kwikhawuntara kwaye isinki ihleli ngqo phezulu kwikhawuntara.
Bhetyebhetye -Ukufana nokulula kofakelo, ukuguquguquka kwesinki yesikhephe yiprojekhthi efanelekileyo kakhulu. Ndiyabulela kukungabikho kwesidingo sokusika nantoni na ngaphandle komngxunya wokuhambisa amanzi, isinki ayinamathele kubungakanani okanye imilo ethile, inokutshintshwa ngokulula ukuze ilandele iintsingiselo okanye abasebenzisi abatsha.
Ukuphuphuma - Ngokwesiqhelo ukwehla kwesinki kunendawo yokuphuphuma ecaleni, kodwa ngesinki yesitya engenakwenzeka. Oku kuthetha ukuba isinki yesikhephe inokugcwala xa ingajongwa kakuhle. Oku kubangela isidingo sombhobho okhethekileyo, ochazwe ngokweenkcukacha apha ngezantsi.
Ulondolozo -Ukugcinwa kwesinki yenqanawa kunzima ngakumbi kunesinki yomndilili. Ukucoca macala onke kunzima njengoko indawo apho isinki ihlangana khona nekhawuntari yindawo encinci kwaye kunzima ukuyifundisa. Oku kunokubangela ulondolozo olongezelelweyo olufunekayo kunye nezixhobo ezifunekayo.
Ukuzinza - Izikhephe zeenqanawa zibhenceke ngokugqithileyo ezinokukhokelela ekuqhekekeni okanye ekucutheni. Isinki yesitya iphakanyisiwe enokubangela ukongeza ukungqubana kwisitya.
Uhlobo Ngelixa isitayile sinokuba yiprojekhthi, inokuba sisinxibelelanisi ngokunjalo. Isinki yesikhephe inokuba yinto yomhla kwaye engathandekiyo ukuba ayinakwenziwa ngokuchanekileyo. Abanye abayili bacinga ukuba isinki igqithisile kwaye ayisebenzi.
Ukuphakama -Ingqameko yesinki yesitya iphezulu kunesinki eqhelekileyo enokwenza kube nzima kubasebenzisi abafutshane. Ukuphakama kunokuba nefuthe ekusebenzeni kwesinki kwimisebenzi yemihla ngemihla.
ucela njani imali yomtshato
Ngelishwa ukutshona kweenqanawa akusebenzi njengokutshona okumiselweyo. Izikhephe zeesitya zihlala phezulu kunesinki yomndilili enokubangela ukuba kube nzima kubantu abafutshane okanye ukugqiba imisebenzi yemihla ngemihla enjengokuhlamba ubuso okanye ukuxukuxa amazinyo.
Esona sithuba sisebenzayo sokubeka isinki yegumbi ligumbi le powder okanye igumbi lokuhlambela elincinci apho abantu baya kuhlala behlamba izandla.
Olunye uqwalaselo lokwenza ngu Ukukhetha itephu efanelekileyo yokuhlambela kolu hlobo lwesinki. Iipompo zesinki zokuntywila zinokuphakama kumgangatho okanye zibekwe eludongeni. Nangona kunjalo, zahlukile kwiimpompo eziqhelekileyo ngokobungakanani.
Ngokwesiqhelo ikhonkco elinyusiweyo lomphambili wenqanawa yokuntywila kwinqanawa ngobukhulu ukusuka kwi-intshi ye-12 ukuya kwi-17 ubude. Ihlala inoyilo lwentamo egobile eyenza ukuba kube lula ukuhlamba izandla kunye nokufumana isitya sokuntywila esiphakamileyo.
Kubalulekile xa ufaka ukuqinisekisa ukubekwa kokuhamba kwamanzi ngqo embindini wesinki. Oku kuya kunceda ukunqanda ukutshiza ngamanzi ngokungeyomfuneko.
Isinki yesitya iqhele ukufakwa ngokudibeneyo kunye nomsele wegridi. Ezi ntlobo zemijelo zinokubangela inkqubo yokucotha kancinci, kodwa kukho iindlela ezijikeleze oko.
Iingoma zikatata oyintombazana
Ukuba kukho ukungena ngokukuko kwimibhobho yokuhambisa amanzi akufuneki kubekho ngxaki ngokutsala. Ukuba kukho ingxaki ngomsinga oya ezantsi ngokucotha, kunokuba ngumcimbi omkhulu kuba akukho dreyini iphuphumayo ukulungisa ingxaki ukuba iphakama kakhulu.
Ukugqobhoza amadreysi ayisiyonto inokukhetha kwisitya sokuntywila kuba isinki ihleli kwikhawuntara endaweni yangaphantsi apho inokudityaniswa khona kumbhobho wokutsala wesibini.
Ngaba iiSinks zeSitya zifuna uMsele okhethekileyo?
Njengoko sele kukhankanyiwe malunga nesinki yesitya ayinakho ukukhupha amanzi aphuphumayo, idreyini eqhelekileyo inee-hookups zazo zombini ezona zinto ziphambili zokuhambisa amanzi kunye nokuphuphuma komsele.
Ukulungiselela ukungabikho komsele ophuphumayo kufuneka kubekho uhlobo olukhethekileyo lokuhambisa amanzi olunombhobho omnye kuphela. Lo mbhobho kufuneka wenziwe apho unokuntywila khona ngesantya esifanelekileyo ngokufaka i-venting ukuze isinki ingadinisi kakhulu kwaye igcwale isinki rhoqo.
Izikhephe zeenqanawa ziselukhetho oluqhelekileyo ukuba kukhethwe uhlobo oluchanekileyo. Zininzi iimeko apho isitya sokuntywila asikhethi ngokufanelekileyo kwindawo efanelekileyo yokuhlambela, kodwa oko kunika uyilo olunqabileyo nolwahlukileyo.
Ukuvela kuyilo lwesinki yesikhephe kuye kwahambelana nokutshintsha kweefashoni ngokusebenzisa izinto ezahlukeneyo kunye neemilo. Ngeemilo ezininzi, ubukhulu kunye noyilo lweesinki zesikhephe banokwandisa ukuya kwizitayile ezingaphezulu, ukugcina isitya sokuntywila kufanelekile.
Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela igalari yethu iintlobo zeethayile zangasese .
Izipho zekrisimesi ezilungileyo zomfazi wam
Iingoma zomdaniso womama nonyana zika-2020
isipho sonyana ngosuku lomtshato
olona xabiso luthandwayo kuye
yeyiphi na iringi eqhubeka
oza kwisidlo sangokuhlwa kwakhona